Jaamacadda Carabta oo ka hadashay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Jaamacadda Carabta oo ka hadashay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya
Ururka Jaamacadda Carabta oo ay qeyb ka tahay Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay dib usoo laabashada xiriirka labada waddan ee dariska ah Soomaaliya iyo Kenya.
MUQDISHO, Soomaaliys - Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweysay ku dhawaaqistii dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kalana waxa ay ka shaqeyneysaa soo celinta buundooyinkii saaxiibtinimo iyo iskaashi ee labada dal iyadoo lagu saleynayo mabaadi'da deris wanaagga, is ixtiraamka iyo xiriirka ballaaran ee u dhexeeya dadkooda.
Ilo wareed rasmi ah oo ka tirsan Xoghaynta Guud ee Jaamacadda Carabta ayaa muujiyey sida ay Jaamacadda Carabtu uga mahadcelineyso dhammaan dadaaladii wanaagsanaa ee la sameeyey si loo soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya isla markaana meesha looga saaro wixii carqaladeeyey, dadaaladaan oo kii ugu dambeeyey uu ahaa kii ay sameeysay Dowladda Qatar, taasoo horseeday ku dhawaaqista dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dhinac.
Jaamacadda Carabta ayaa ugu yeertay labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya inay sii wadaan ka shaqeynta sidii si buuxda looga dhigi lahaa cilaaqaadka labada dal si loo gaaro danahooda guud isla markaana ay gacan uga geysato xoojinta amniga iyo xasilloonida gobolka.
Dowladda Soomaaliya ayaa uyeertay safiirkeedii Kenya ufadhiyay iyadoo dalka ka ceerisay safiirkii Kenya ufadhiyay Soomaaliya, waxaana muddo kaddib shalay ay ku dhawaaqday in dib loo soo celiyay xiriirkii xumaaday ee kala dhaxeeyay Kenya.
Kenya ayaa iyana qaadday tallaabo ay uga jawaabeyso xiriirka ay ujartay dowladda uu hoggaamiyo Farmaajo waxayna ku dhawaaqday in ay xiri doonto xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakumo oo ay ku jiraan Soomaali badan oo ka cararay dagaaladii ka socday Soomaaliya 30 kii sano ee u dambeeysay.